Kulan Balaadhan Oo Lagaga Hadlay Sidii Loo Habayn Lahaa Nidaamka Dhaqaalaha Somaliland Oo Ay Ka Qaybgaleen Madaxweyne Xigeenka, Baanka Aduunka Iyo Haya’ddo Caalami Ah | Araweelo News Network (Archive) -
Kulan Balaadhan Oo Lagaga Hadlay Sidii Loo Habayn Lahaa Nidaamka Dhaqaalaha Somaliland Oo Ay Ka Qaybgaleen Madaxweyne Xigeenka, Baanka Aduunka Iyo Haya’ddo Caalami Ah
Hargeysa(ANN)Kulan laga hadlayay sidii loo habayn lahaa dhaqaallaha iyo nidaamka cashuuraha Somaliland ayaa maanta lagu qabtay Huteelka Maansoor ee magaalada Hargeysa. Kulankaa waxa kasoo qaybglay Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil, masuuliyiinta
wasaaradaha Maaliyada, qorshaynta, Warfaafinta, hay’addaha kale ee dawladda sida Hantidhawrka guud, gudoomiyaha gudidad dawlad wanaaga iyo saraakiil ka socotay Baanka aduunka iyo baanka horumarinta Afrika, haya’ddo caalami ah.
Madaxweyne xigeenka Somaliland C/raxmaan Seylici oo ka hadlay furitaankii shirkaa ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland ay dhaqan gelinayso shuruucda la xidhiidha maamul wanaajinta iyo xisaabaadka qaranka.
Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) wuxuu hadal uu madashaasi ka jeediyay ku bilaabay sidan:- “Waxa ii farxad ah inaan maanta ka soo qeyb galo kulankan lagu soo bandhigayo sharciyaddii wasaarada Maaliyada iyo qarankaba lagu hagaajinayay maamul wanaaga. Waxaan aad iyo aad uga mahad naqayaa baanka adduunka iyo Ha’yadaha caalamiga ah oo runtii dedaal badan geliyay hawshan. Waxaan u arkayaa in Hayadahani ay naga caawinayaan qaran ahaan nidaamkii lagu ilaalin lahaa xisaabaadka dalka sida miisaaniyadeena oo kale iyo deeqahaba la inagu caawiyaba.”
“Waxaan diyaar u nahay inaan ku dhaqano shuruucda maamul wanaaga, iyadoo dalkayagu ka soo baxay burbur, waxaana aanu rajaynaynaa inaanu muddo kooban ku hirgelino. Nidaam toosinta dhaqaale waa mid dantayadu ku jirto. Waxaan shacbiga Somaliland dareen siinayaa inay ogaadaan in cashuuruhu yihiin waxaynu doonayno inaynu dalkeena ku dhisno oo ku horumarino,”ayuu yidhi Md.C/Raxmaan Saylici.
Madaxweyne Ku Xigeenku wuxuu sheegay in muddadii Somaliland ay jirtay cashuuraha dadka laga qaadaa aanay ka badnayn 20-illaa 30% waxaanu yidhi “Waxaan shacbiga Somaliland ka codsanaynaa in ay cashuurta siday tahay u bixiyaan, wasaarada maaliyada iyo ha’yadaha kale ee ay khusayso nidaamkan maamul wanaajinta xisaabaadka waxaan leeyahay ku dhaqma barnaamijkan oo waxtar u leh dalka.”
Wasiirka Wasaarada Maaliyada Somaliland Md. Maxamed Xaashi Cilmi oo ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay inuu u mahad celinayo masuuliyiinta ka socday deeqbixiyeyaasha iyo Ha’yadaha qaramada midoobay ee ka soo qeyb galay shirkan.
“Dhaqaalaha bulshada oo kor loo qaadaa waxay door ka ciyaaraan in deganaanshaha, dib u dhiska dalka iyo yaraynta faqriga waxa Somaliland maamulka dakhliga dalku wuxuu u leeyahay ahmiyad aad u weyn,”ayuu yidhi Wasiirka Maaliyaddu waxaanu ka Ha’yadaha caalamiga ah ka dalbaday inay sii wadaan barnaamijyada ay Somaliland kaga taageerayaan dib u habaynta maamulka dhaqaalaha.
Wasiirka Wasaarada Qorshaynta Somaliland Md. Sacad Cali Shire, oo shirkaasi ka hadlay wuxuu yidhi “Intii aanan ka noqon xubin dawlada waxaan ka shaqayn jiray oo aan ka imid shirkadaha gaarka loo leeyahay ee (Private sector) sida caadiga ah waxay leeyihiin shirkaduhu afar qeybood oo kala ah qeybta maamulka, qeybta xisaabaadka, qeybta waxsoo saarka iyo qeybta ka suuq geynta. Qeybta xisaabaadku wuxuu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan shirkadahaasi waxa macaashkooda iyo koritaankoodu uu yahay hadba sida qeybta xisaabaadku u shaqayso waayo waa qeybta kuu sheegaysa in shirkadu ay korayso iyo in kale.”
Wasiirka Qorshayntu wuxuu sheegay in Wasaarada Maaliyadu ay dawlada uga dhigan tahay qeybta xisaabaadka ee shirkadaha oo kale isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Wasaarada maaliyaddu waxay dawlada uga dhigan tahay qeybta xisaabaadka ee shirkadaha oo kale. Sida xisaabaadka wasaaraddu yahay ayaa dawladana awoodeedu tahay. Wasaarada maaliyadu waxay u xil saaran tahay ururinta dhaqaalaha qaranka, bixintiisa iyo dabo galkiisa. Haddii dakhli ururintu yar tahay awooda dawladu way yaraanaysaa. Wasaaraddu waxay u baahan tahay dadkii, qalabkii iyo nidaamkii ay ku shaqayn lahayd in loo dhigo.”
Wasiirku wuxuu uga mahad celiyay Hayadaha caalamiga ah siday Somaliland uga taageerayaan wasaarada maaliyada nidaamka maamul wanaaga dakhliga.waxaanu dadweynaha u soo jeediyay inay si wanaagsan iskaga bixiyaan cashuuraha ku waajibay.
Waxa kale oo kulankaasi ka hadlay Agaasime goboleedka baanka adduunka waxaanu yidhi “Waxa sharaf ii ah anigoo ku hadlaya magaca agaasime goboleedka baanka adduunka, aad iyo aad ayaanu ugu faraxsan nahay kulankan waxaanu ka wadnaa Somaliland laba barnaamij oo kala ah barnaamij oo waxtar weyn u leh dhaqaalaha dalka ah maamulka maaliyada qaranka.”